Top iPod in Transfer freeware Computer: Music Transfer / Videos / Photos
> Resource > iPod > Top iPod in Transfer Computer oo bilaash ah
Qof walba jecel yahay freebie. Dadka isticmaala iPod, freebie ay jeclaan ugu laga yaabaa in qalab lacag la'aan ah iPod inay kala iibsiga computer kuwaas oo kaa caawin doona iyaga music, playlists, videos, iyo sawiro nuqul ka iPod ah in computer ah. An qalab lacag la'aan ah iPod inay kala iibsiga computer yahay gaar ahaan marka aad dareentid in songs qaar ka mid ah laga badiyay ka Lugood Library, laakiin waxa ay ku jiraan aad iPod sidoo.
Waxaa jira iPod badan xisaabinta qalab kala iibsiga. Si kastaba ha ahaatee, Badankoodna waa shareware taas oo macnaheedu yahay in ay isticmaalaan feature ay u guuraan files ka iPod si aad u computer, waa in aad bixiso. Waxaa jira qaar ka mid ah iyo sidoo freebies, laakiin ma waxaad filan kartaa in ay ka shaqeeyaan sidii smart sida shareware ah. Si kastaba, waxaad iyaga isku dayi kartaa in aad aragto haddii ay si buuxda u la kulmi kartaa shuruudaha ama aan.
Mid ka mid ah iPod ugu caansan inay kala iibsiga computer qalab free waa SynciOS . Waxaa la sameeyay sida kale Lugood ah si hagaagsan music ka iyo in iPod. Waxay kaa caawin doona inaad nuqul ka files warbaahinta, oo ay ku jiraan music, podcasts, ringtone, buugaag, videos, sawiro, iyo in ka badan ka iPod in aad Xisaabiyaan u gebi ahaanba bilaash ah. Hadda waxa ay si buuxda u la jaan qaada macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 macruufka 9, iyo Lugood 12. Hadda SynciOS ayaa diyaar u ah Windows PC. Ma jiro version u Mac weli.
PodTrans waa iPod software si xor ah sidoo kale. Waxa looga golleeyahay ee isticmaala caawinaya in aad nuqulka music ka iyo in iPod si fudud. Music ka sokow, waxa ay taageertaa noocyada kale ee files warbaahinta, sida filimada, videos, buugaag, podcasts, bandhigyada TV, iyo in ka badan. Waxaa si joogta ah u la updated si ay u taageeraan Lugood dambeeyay. Hadda, waxaa u shaqeeya oo dhan taxane iPod, laga bilaabo shaandheeyn lagu iPod in iPod taabto.
SynciOS Marka la barbar dhigo PodTrans, SynciOS waa xoog badan iyo PodTrans waa fududdahay in la isticmaalo. Waxaad isku dayi kartaa oo labadoodaba waxaa ka si ay u doortaan mid ka mid ah oo aad jeceshahay fiican. Waxaan isku daynay nooc oo kale oo dhowr ah iPod in freeware kala iibsiga computer, laakiin ay ku dhegeen Wondershare TunesG o. In kastoo ay tahay shareware, runtii aad buu u shaqeeyaa si songs, playlists, videos, sawiro, iwm wareejiyo iyo in iPod. Maxaa ka fiican, waxa ay bixisaa fursado heeso iyo playlist wareejiyo ka iPod ah in ay si toos ah Lugood, taas oo aad u fudud u isticmaala dib u dhiska ay Lugood Library.
Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa version maxkamad si xor ah u leeyihiin isku day ah!